စည်းကမ်း မလိုက်နာသူ ဦးပိုင်ဝန်ထမ်း ကြိမ်ဒဏ်ပေးခံရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » စည်းကမ်း မလိုက်နာသူ ဦးပိုင်ဝန်ထမ်း ကြိမ်ဒဏ်ပေးခံရ
စည်းကမ်း မလိုက်နာသူ ဦးပိုင်ဝန်ထမ်း ကြိမ်ဒဏ်ပေးခံရ
Posted by Bayote on Mar 23, 2010 in Myanma News, News |7comments
မြန်မာ့ စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်၏ လုပ်ငန်းတချို့တွင် စည်းကမ်း မလိုက်နာ သူများနှင့် လုပ်ငန်း တိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်း မရှိသူ ဝန်ထမ်းများကို ကြိမ်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ် ချမှတ် နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ဦးပိုင်၏ လုပ်ငန်းတခု ဖြစ်သော ဗန္ဓုလ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းမှ အဓိပတိ (ပါရမီ) အထူးယာဉ် လိုင်းများတွင် စီးပွားရေး အရ အောင်မြင်မှု ရစေရန် အတွက် ယာဉ်မောင်းများနှင့် စပယ်ယာများကို ကြိမ်ဒဏ် ချမှတ် အရေးယူသည့် စနစ် ကျင့်သုံး ရကြောင်း အဆိုပါ လုပ်ငန်းမှ တာဝန် ရှိသူများက ဆိုသည်။
ရန်ကုန် မြို့တွင်း ပြေးဆွဲလျက် ရှိသော အဓိပတိ အထူး ယာဉ်လိုင်းများ အားလုံးတွင် မတ်လဆန်းပိုင်းမှ စတင်၍ သတ်မှတ် ၀င်ငွေ ပြည့်မီအောင် ရှာဖွေ မပေးနိုင်သော ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက် လိုက်များ၊ စည်းကမ်း လိုက်နာမှု မရှိသော ၀န်ထမ်းများကို ကြိမ်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ် ချမှတ်နေကြောင်း အဆိုပါ ယာဉ်ဝန်ထမ်းများက ပြောသည်။
“ယာဉ်မောင်းတွေရော၊ ကားစပယ်ယာတွေရော ကြိမ်ဒဏ်ပေးတာ။ အဓိက အဓိပတိ အထူးလိုင်းကားတွေမှာ ခုံပြည့်ပဲ တင်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာကို မတ်တပ်ရပ်စီး ခရီးသည်တင်တာတွေ့ရင်၊ ယူနီဖောင်း သေသေချာချာမ၀တ်ရင်၊ တနေ့ သတ်မှတ်ငွေ မပြည့်ရင် ကြိမ်ဒဏ်ပေးတယ်” ဟု အဓိပတိယာဉ်လိုင်းမှ ယာဉ်မောင်းတဦးက ပြောသည်။
အဓိပတိယာဉ်လိုင်းသည် ပါရမီ အထူးယာဉ်လိုင်းဖြစ်သောကြောင့် ခုံပြည့်သာ တင်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထား သော်လည်း ယခု နောက်ပိုင်းတွင် အပြည့်အကျပ် တင်ကြကြောင်း ရန်ကုန် ခရီးသည်များက ဆိုသည်။
“စဆွဲခါစကတော့ ခုံပြည့်ပဲတင်တာ။ အဲယားကွန်းလည်း ဖွင့်တယ်၊ တီဗီလည်း ပြတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ အပြည့်အကျပ် လိုက်သလောက် တင်တယ်။ လူတွေကလည်း ကျပ်ချင်ကျပ်ပါစေ၊ သွားချင်တဲ့ဆီ အမြန်ရောက်ချင်တော့ အတင်းလိုက်ကြတာပဲ” ဟု ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေထိုင်သူ တဦးက ပြောသည်။
ကြိမ်ဒဏ်ပေးရာတွင် အဓိပတိ ယာဉ်လိုင်းများ၏ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ရှိသူများ ကိုယ်တိုင် လူအများရှေ့တွင် ရိုက်နှက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အပတ်စဉ် ကြိမ်ဒဏ်အရိုက်ခံရသူ အဓိပတိယာဉ်လိုင်းမှ ၀န်ထမ်း ၁၀ ဦးကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ကြိမ်ဒဏ်ရိုက်ရင်တော့ ခွဲမှူးတွေ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တာ။ အပြစ် အကြီး၊ အသေးပေါ်မူတည်ပြီး ရိုက်တာ။ အပြစ်တခုအတွက် အနည်းဆုံး သုံးချက်ရိုက်တယ်။ ရိုက်တဲ့ကြိမ်က တော်တော်လေးကြီးတယ်။ အထက်လူကြီးကို ပမာမခန့် လုပ်တာမျိုး ဆိုရင် ကြိမ်လုံးကို နှစ်ချောင်းပူးပြီး ရိုက်တာ” ဟု အဆိုပါ ယာဉ်လိုင်းမှ ယာဉ်နောက်လိုက် တဦးက ဆိုသည်။
အဓိပတိ ယာဉ်လိုင်းတွင် ယင်းသို့ ကြိမ်ဒဏ်ပေးသည့်စနစ်ကို ၀န်ထမ်းအများစုက ကျေနပ်မှု မရှိသော်လည်း ဗန္ဓုလ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း၏ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမြင့်၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် မလွန်ဆန်ရဲကြကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအထူးယာဉ်လိုင်းတွင် ပြေးဆွဲနေသော ယာဉ်စီးရေ ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီး ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက် ၀န်ထမ်း အများစုသည် ကြိမ်ဒဏ်ပေးသည့် စနစ်ကြောင့် အလုပ်ထွက် လိုသော်လည်း အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသည့်အတွက် သည်းခံ လုပ်ကိုင်ကြရ သည်ဟု ယာဉ်မောင်းတချို့က ဆိုသည်။
ဗန္ဓုလ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူများကမူ ခရီးသွားပြည်သူများအတွက် ယခုကဲ့သို့ ၀န်ထမ်းများကို ကြိမ်ဒဏ်အပြစ် ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
“လိုင်းကားစီးတဲ့ ခရီးသည်တွေ အဆင်ပြေစေဖို့ ၀န်ထမ်းတွေကို ကြိမ်ဒဏ် အပြစ်ပေးတဲ့ စနစ်သုံးတာပါ။ ကြိမ်ဒဏ် ဆိုတာ ကလည်း အရမ်းရိုက်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း၏ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
အဓိပတိ ယာဉ်လိုင်း ၀န်ထမ်းများကို ကြိမ်ဒဏ် အပြစ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း အဆိုပါ အထူးယာဉ် အားလုံးတွင် စာဖြင့် အသိပေးထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဝန်ထမ်းများကို ကြိမ်ဒဏ်အပြစ်ပေးခြင်းအပေါ် ပြည်သူအများစုက နှစ်မြို့ခြင်း မရှိဘဲ အာဏာရှင်ဆန်သော လုပ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။
“ကြိမ်ဒဏ်ဆိုတဲ့အသံက နားထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲ။ တခါမှ အဲဒီလို ဒဏ်မျိုး မကြားဖူးဘူး။ ကြိမ် ဒဏ်အစား တခြား ဒဏ်မျိုးတော့ ပြောင်းပေး သင့်တယ် ထင်တယ်။ စစ်တပ်က စီးပွားရှာတဲ့ နေရာမှာလည်း ရက်ရက်စက်စက် လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာ ပြတာပဲ” ဟု ရန်ကုန်မြို့သား တဦးက ပြောသည်။
မြန်မာ့ စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း၊ သင်္ဘောလိုင်း လုပ်ငန်း၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ ဆီဆိုင်များနှင့် ဆီရောင်း ချသည့် လုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း အပါအ၀င် ပြည်သူပိုင် လုပ်ငန်း အများအပြားဖြင့် စစ်တပ်ရန်ပုံငွေ ရှာပေးနေသော စီးပွားရေး အစုအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ ဥပေဒထဲမှာ လူကိုကြိမ်ဒဏ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှ ဒီလိုမျိုး လူသားမဆန်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးကို ပေးခွင်မရှိပါဘူး။ စီပွားရေးဦးပိုင် ကလည်း ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူး။ ရန်ကုန်မှ နေတဲ့ ကျွန်တော့်အနနဲ့လည်း ဒီသတင်းမျိုးမကြားဖူးပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဧရာဝတီ က သတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
တစ်ကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဥပဒေ အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ အတော်များလာပြီလို့ ဆိုရမယ်။
စည်းကမ်းမလိုက်နာလို့ ကြိမ်ဒဏ် ကို သင့်တော်သလို (ခြောက်ရုံလောက်)ပေးတာကောင်းပါတယ်
ဒါမှ ကြုံသလိုလုပ်တဲ့ ယာဉ်နောက်လိုက် အကျင့်ပျောက်သွားမယ်
ဒါပေမယ့် သတ်မှတ် ၀င်ငွေ မပြည့်လို့ ကြိမ်ဒဏ် ပေးတာတော့ လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါ
ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လားကွယ်။ ကြိမ်ဒဏ်ဆိုတာ တမျိုးကြီးဘဲ ကျောင်းတွေမှာ ကလေးတွေကို ရိုက်ရင်တောင် ဆရာမကို တိုင်လို့ရပါတယ် တရားစွဲလို့ရပါတယ်။ ကျောင်းသားနှင့် ဆရာဆိုတာကတော့ သြဇာ အကြီးမားဆုံး အချိန်ဘဲ ကျန်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာကတော့ တယောက်ကို တယောက် လေးစားမှုနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ ပတ်သတ်မှုမျိုးပါ။ ဒါမျိုး ကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဟုတ်နေရင်တောင် ကန့်ကွက်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးကြီးဘဲ
သတ်မှတ် ၀င်ငွေ မပြည့်လို့ ကြိမ်ဒဏ် ပေးတာတော့ လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါ။ဒါပေ မဲ့ ထိုင်ခုံ အပြည်. ပဲ တင် သင်.တယ် ။မိန်းကလေး တွေ ပို. လဲ ကောင်း ပါ တယ် ။ Myanmar နိုင်ငံ တိုး တက် တော.မယ် ။
လူကြားကောင်းအောင် ဇာတ်လမ်းထွင်ပြောတာနေမှာပေါ့ ချီးစားပြောတောင်မယုံဘူး ဦးပိုင်ရေ………
ဘယ်လို နည်းနဲ့ ဒဏ်ပေးပေး အကျင့်တွေ မပြင်တရွှေ့တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး ……
ကြိမ်ဒဏ် ဆိုတော့ နဲနဲ တော့ ထိရောက် မှုရှိမယ်ထင်တယ် ….
အသားနာတာကိုး ……. ငယ်ငယ်ကတည်းက အသားနာမှ မှတ်တာ ……..
ဒါပေမဲ့ လူဗျ … အသားနာမှ သိတတ်တာတော့မကောင်းပါဘူး …………………
ကျေးပိုင် ကျွန်ပိုင် ခေတ်ရောက်လာပြီလားမသိ………. ရာဇ၀င်ဘီးတစ်ပတ်လည်သတဲ့ ကြားဖူးတာပဲ….